By soniya on	 18th August 2020 Highlights, नेपाली, समाचार
मंगोल हप नामको युट्युब च्यानलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको गीतलाई मंगोल ग्याल्जीले लेखेका हुन् । गीतलाई युट्युबमा ५९ हजार बढीले ‘डिसलाइक’ गरेका छन् । भिडियोमा झन्डाको अपव्याख्या गरिएको छ । भिडियोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पृथ्वीनायारायण शाहलगायतको तस्बिरसमेत जलाइएको छ ।
मंगोल मास्ने, खस लिपि लाद्ने, उर्वर भूमि खोस्ने, विजयादशमी मान्न लगाउने कुनै जाति विशेष नै भएको उल्लेख गर्दै गीतमा मंगोल राष्ट्रवादको बाटो रोज्नुपर्ने बताइएको छ ।
भिडियोमा नेपालको झन्डा जलाएको भन्दै कमेन्टमा आपत्ति जनाउनेहरुले गायकलाई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । ‘यस्तो काम गर्ने सोच कसरी आउँछ । म यो पूरा गीतसँग सहमत छैन । कसैसँग जातीयता र जातको आधारमा विभेद गर्न अधिकार छैन । उनीहरुले सजाय पाउनुपर्छ र यो गीत ब्यान्ड हुनुपर्छ,’ लक्ष्मी पुनले कमेन्टमा लेखेकी छिन् ।
धेरैले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा कारबाहीको माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले झन्डा जलाउने धार्मिक सामाजिक र जातीय द्वेष फैलाउनेलगायतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्न प्रहरी खटिएको बताए । एसएसपी कडायतले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १५१ क(१) अनुसार दोषीलाई कारबाही हुने बताए । राष्ट्रियगान, राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग नेपाल र नेपाल सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने गराउनेलगायतका गतिविधि गर्नेमाथि तीन वर्ष कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भिडियोको चौतर्फी विरोध भएपछि गायक ग्याल्जीले ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामको फेसबुक अकाउन्टबाट लाइभ गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई सिधै देशदोह्रीको आरोप आइरहेको छ । देशदोह्री के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालभित्रको असली मूलवासीको राष्ट्रियता लुट्ने को त ? त्यही बाहुन क्षेत्री होइन त ? मैले सबै बाहुन क्षेत्रीलाई भन्न खोजेको होइन । जो नीति बनाउने क्षेत्रमा पुगेका छन् उनीहरुलाई भनेको हो ।’
र्‍यापर मिस्टर डी(सन्दीप विष्ट) ‘देशदोह्री’ले र्‍यापकै बेइज्जत गरेको बताउँछन् । ‘गीतले भन्न खोजेको कुरा अरु होला । तर त्यसमा राष्ट्रको झन्डा जलाइएको देखाइएको छ । र्‍याप भनेको राम्रो हो भनेर भर्खरै विकसित हुँदै थियो यस्तो गीतले र्‍यापकै बेइज्जत गरेको अनुभव भयो गीत सुन्दा’, उनले भने, ‘राष्ट्रको झन्डाको महत्व नबुझ्नेले त्यस्तो गर्ने हो । खासमा सरकारले त्यस्तोलाई समात्ने हो भिटेनहरुलाई होइन । त्यस्तो व्यक्ति त देशदोह्री नै भयो नि त ।’